कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन २४ गते ,शुक्रबारको राशिफल ! – ताजा समाचार
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन २४ गते ,शुक्रबारको राशिफल !
वि.सं. २०७६ साउन २४,शुक्रबार इ.स, . २०१९ अगस्ट ९, संवत् १९४१,परिधावी संवत्सर, दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, ने.सं. ११३९ गुँलाथ्व, श्रावण शुक्लपक्ष, नवमी, १३:५६ उप्रान्त दशमी, नक्षत्र– अनुराधा, २६:१५ बजेउप्रान्त ज्येष्ठा, योग– ब्रह्म, १६:५३ बजेउप्रान्त ऐन्द्र, करण– कौलव, १३:५६ बजेदेखि तैतिल, २५:२९ बजेउप्रान्त गर,आनन्दादिमा राक्षस योग, चन्द्रराशि– वृश्चिक, सूर्योदय– ५:३१ बजे, सूर्यास्त– १८:४६ बजे र दिनमान ३३ घडी ६ पला। विश्व आदिवासी दिवस।
आजको दिन विशेष रुपमा धार्मिक र आध्यात्मिक प्रवृत्ति रहनेछ । मनमा द्विविधा रहँदा कुनै ठोस निर्णय लिन सक्नु हुने छैन । पैशाको लेन देन या आर्थिक व्यवहार गर्न सक्नु हुने छैन । शारीरिक र मानसिक बेचेनीको अनुभव हुनेछ । धार्मिक कार्यमा धन खर्च हुनेछ ।
व्यापारमा वृद्धि हुनुका स्थाई व्यापारमा गरिएका सम्झौता लाभदायक हुनेछन् । आयको श्रोतमा वृद्धि हुनेछ । मित्र वर्ग संग लाभदायक र सुखद क्षणको अनुभव हुनेछ । दांपत्यजीवनमा शन्तोष र आनन्द रहनेछ । पर्यटनको आयोजना हुनेछ । महिला वर्गको तर्फबाट मान-सम्मान र लाभ हुनेछ ।
शारीरिक र मानसिक सुख हुनेछ । व्यवसायमा परिश्रमको मुहाव्जा मिलेको प्रतित हुनेछ । अधिकारी वर्गको प्रोत्साहनले उत्साह बढ्नेछ । सामाजिक क्षेत्रमा प्रतिष्ठा बढ्नेछ । कौटुम्बिक माहोल आनन्दमय रहनेछ । पिताबाट लाभ हुनेछ । सरकारी कार्य पूर्ण गरन सरलता हुनेछ । दाम्पत्य जिवनमा सुख र आनन्द अनुभव गर्नु हुनेछ ।
आज तपाइँको भाग्रा वृद्धिको साथ आकस्मिक धन लाभ हुनेछ । विदेश जना इच्छुकहरु आफ्नो प्रयासमा सफल रहनु हुनेछ । विदेशबाट राम्रो समाचार आउनेछन् । धार्मिक कार्य या यात्राको लागी धन खर्च हुनेछ । पारिवारिक सदस्य र पदाधिकारीहरुको साथ सुखमय दिन बित्नेछ । नोकरी गर्नेहरुलाई लाभ हुनेछ ।
स्वास्थ्यको ध्यान राख्नु होला । स्वास्थ्य बिग्रदा धन खर्च हुन सक्ने सम्भावना छ । निषेधात्मक विचारले गलत मार्गमा लैजान सक्ने छ । पारिवारिक सदस्यको साथ मनमुटाव हुन सक्दछ । अनैतिक कार्यबाट बदनामी हुने योग छ । इष्टदेवको नाम स्मरण र आध्यात्मिक विचारले सहि मार्गदर्शन गर्नेछ ।
दाम्पत्य जिवनमा सुखद क्षणको अनुभव गर्नु हुनेछ । सामाजिक र सार्वजनीक क्षेत्रमा ख्याती र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ । मनोरंजनमा भाग लिने अवसर प्राप्त हुनेछ । वास्त्राभुषण र वहानको खरिद हुनेछ । धन लाभ हुनेछ ।
स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ बिमारी व्यक्तिको स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउनेछ । घरमा सुख शान्तीको वातावरण रहनेछ । कार्यमा सफलता र यश मिल्दा उत्साह बढ्नेछ । नोकरीमा सहकर्मीको साथ रार सहयोग मिल्नेछ । प्रतिस्पर्धी पराजय हुनेछन् ।
आज कुनै यात्रा प्रवासको आयोजना नगर्नु होला । स्वास्थ्यको सम्बन्धमा चिन्तित रहनु हुनेछ । सन्तानको सम्बन्धमा समस्या आउनेछ । स्वाभिमान भंग नहोस् यसको ख्याल राख्नु होला । बौद्धिक चर्चा या वाद-विवादमा भाग लिनु लाभदायक रहनेछ ।
अत्यधिक संवेदनशीलताको कारण मानसिक रुपले चिन्तित रहनु हुनेछ । माताको स्वास्थ्यको विषयमा विशेष ध्यान राख्नु होला । साहित्य सर्जन वृद्धिको लागी निकै राम्रो दिन छ । स्नेहीजनको साथको भेटघाटले मन प्रशन्न हुनेछ । मध्याहन पश्चात घरमा शान्तीपूर्मा वातावरण हुनेछ । कार्यालयमा सावधानी अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। आज सहजताको कमीले गर्दा तपाईँ आफ्नो वैवाहिक जीवनमा निस्सासिएको महसुस गर्न सक्नु हुन्छ। तपाईंको अत्यधिक ऊर्जा र अथाह उत्साहले अनुकूल परिणाम ल्याउनेछ र घरेलू तनाउ सुधार्नेछ। मायामा डुब्नु आज तपाईंको लागि पाप हुन सक्छ, सावधान रहनुहोस्।
तपाईंको जिद्दी व्यवहारले घर र आफ्नो घनिष्ठ मित्रलाई पनि कलंकित गर्दछ। तपाईंका प्रियले तपाईंलाई खुसी राख्ने कुराहरू गर्नेछन्। आफ्नो दृष्टिकोणमा इमानदार र सही हुनुहोस् – तपाईंको सङ्कल्प र कौशलले परिचय प्राप्त गर्नेछ। शारीरिक रुपले स्फुर्ती र प्रफुल्लताको अभाव रहनेछ ।
आज तपाइँ चिन्ता मुक्त रहनु हुनेछ । सांसारिक विषयबाट मन अलिप्त रहनेछ । व्यापारमा भागीदारबाट सम्हालिएर रहनु होला । कार्यमा विघ्न उत्पन्न हुँदा कर्यपूर्तीमा विलम्ब हुनेछ । दाम्पत्य जिवनमा मनमुटावको वातावरण लामो समय सम्म नरहोस् यसको पूर्ण ख्याल राख्नु होला ।